फूलैफूलको मौसम...- फोटोफिचर - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक १४, २०७५ पर्वत पाेर्तेल
भद्रपुर (झापा) — चाडपर्वका बेला प्रयोग हुने फूलमा वर्षेनी भारतको भर पुर्नपर्छ । तर, झापाका केही किसानले भने स्वदेशमै फूल खेती गरेर भारतमाथिको परनिर्भरता घटाउने चेष्टा गरेका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७५ ०९:३७
भद्रपुर झापाका दम्पती खेमराज दाहाल तथा खगेन्द्रा खुसीले भद्रपुरमा २ बिगाह क्षेत्रफलमा सयपत्री र मखमलीको व्यवसायिक खेती गरेका छन् । यतिबेला उनीहरुको फूलबारी सयपत्री मखमलीले ढकमक छ ।
चाड पर्वमा मात्र होइन, विभिन्न सभा समारोहमा समेत फूल र माला अनिवार्य जस्तै छ । तर, सधै भारतकै भर पर्नु तीतो यथार्थ छ । दाहाल भन्छन्,‘सधै भारतको भर गर्नु नपरोस भनेर खेती सुरु गरेका हौ ।’
भद्रपुर–७ इलुबारीको लिजमा लिएको करिब दुई बिगाहा १० कठ्ठा जमीनमा फूल खेती गरिएको छ । फूल खेती गर्न करिब ५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको दाहालले जानकारी दिए । ‘फूलको विक्रीबाट लगानी चै उठाउने योजना छ’, पौडेल भन्छन् ।
जिल्लाका मेचीनगर, विर्तामोड लगायतका क्षेत्रका किसानले समेत दाहाल दम्पतीले झै फूल खेती गरेका छन् ।
सबै तस्बिरहरुःपर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर
किन हराए गोर्खाल्यान्डका विमल गुरुङ ?
लोकसभा चुनावअघि दार्जिलिङ उकाल्ने भाजपा योजना
कार्तिक १३, २०७५ पर्वत पाेर्तेल
सिलगढी, भारत — पश्चिम बंगालको हिमाली जिल्ला दार्जिलिङलाई अलग प्रान्त बनाउने माग उठेको शताब्दी अघिदेखि नै हो । कुनै समय दिवंगत नेता सुवास घिसिङले ‘गोर्खाल्याड’ नामकरण गरेर आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए ।
दशकयता गोर्खा जनमुक्ति नामको पार्टी बनाएरै विमल गुरुङले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । तर, करिब दुई वर्षयता विमल आन्दोलनको मोर्चामा त छैनन् नै, आफैं पनि बेपत्ता छन् । विमलको स्थान उनकै निकट मानिने विनय तामाङको कब्जामा छ ।
त्यस भए विमलचाहिँ कहाँ होलान् ? बन्दी पो बनाएर राखेको छ कि ? यस्ता तमाम जिज्ञासा उब्जिएका छन् । विमलको अवस्थाबारे दार्जिलिङवासी तथा गोर्खाल्याडका समर्थक बेखबर छन् । दिल्लीमा छन् कि भन्ने पनि अनुमान पनि छ । नेपालमा लुकेर बसेको हल्ला पनि फैलियो । पश्चिम बंगाल सरकारको गुप्तचर विभागले चाहिँ विमलसहितका अगुवा नेता दिल्लीमा रहेको दाबी गरेको छ ।
लामो समय पूर्णरूपमा ‘भूमिगत’ बनेका विमल गएको महिना दिनयता भने सञ्चारमाध्यमहरुमा आउन थालेका छन् । गत वर्ष प्रहरी हिरासतमा मारिएका कालिम्पोङ नगरपालिकाका पार्षद वरुण भुजेलको वार्षिकीको सन्दर्भमा गोप्य स्थानमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा उनी देखा परे । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुलाई यति बेला उनले अडियो, भिडियो क्लिप तथा विज्ञप्तिहरु पठाइरहेका छन् । गुप्चतर स्रोत भन्छ, ‘विमलसहितका नेता सत्तारूढ भाजपाको संरक्षणमा छन् ।’
केही समयअघि दार्जिलिङका भाजपा सांसद सुरिन्दर सिंह आहलुवालियाले विमललाई राज्य सरकारले ‘हत्या’ प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । उनको यो आरोपपछि राज्य सरकारले विमल केन्द्र सरकारकै संरक्षण रहेको अनुमान गरेको थियो ।
किन हराए विमल ?
पश्चिम बंगाल सरकारले कक्षा १ देखि १० सम्म राज्यका सबै शैक्षिक संस्थामा बंगला भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि ८ जुन २०१६, बाट दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनको नेतृत्व गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा र यसका अध्यक्ष विमलले गरेका थिए । करिब १ सय ४ दिनसम्म चर्किएका आन्दोलनमा १२ जना जति सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।
यो विरोध सभालाई अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेका विमल त्यसपछि लगातार चर्किएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि भने प्राय: बेपत्ता बनेका थिए । खासमा राज्य सरकारले उनलाई मदन तामाङ हत्या काण्डदेखि दार्जिलिङको लेप्चाबस्ती घटना र त्यसमा मारिएका प्रहरीको मुद्दा लगाएको छ ।
जसका कारण आन्दोलनकै समय उनी पक्राउ पर्ने सम्भावना थियो । आफू पक्राउ पर्ने डरले यिनी सिक्किममा आश्रय लिएर बसे । त्यही पुगेर प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्यो । तर, उम्किए ।
एकाथरी समर्थकले आन्दोलनको मोर्चा छाडेर विमल भागेको आरोप लगाए । यी आरोपीहरुको नेतृत्वकर्ता थिए, विमलकै विश्वासपात्र मानिने विनय तामाङ । विमल आन्दोलन छाडेर भागेको भन्दै उनले राज्य सरकारसँग घुँडा टेकेका थिए ।
‘राज्य सरकारले विमललाई लखेटिरह्यो, उनका विश्वासपात्रलाई हातमा लिएर आन्दोलन नै समाप्त पारिदियो,’ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई नजिकबाट बुझेका राजनीतिक विश्लेषक सीके श्रेष्ठले भने ।
राज्य सरकारले आगामी लोकसभा चुनावलाई लक्षित गर्दै विमललाई योजनाबद्ध ढंगबाट लखेटेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । राज्यबाट लखेटिएका उनलाई केन्द्रले संरक्षणमा राखेको छ । केन्द्रको स्वार्थ पनि उही छ, चुनाव ।विमललाई दार्जिलिङमा पुन:स्थापित गर्ने योजनामा केन्द्र सरकार छ ।
किनभने आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा भाजपाले दार्जिलिङ हत्याउनु छ । दार्जिलिङ विगतदेखि नै भाजपाको ‘सेफ सिट’ हो । जशवन्त सिंह र आहलवालियाले मोर्चाको समर्थनमा जितेका थिए । रोचक के भने जुन सुकै केन्द्रीय दललाई सिट हत्याउन दार्जिलिङका दलहरुको समर्थन अनिवार्य नै हुन्छ ।
खासगरी गोजमुमोको मत निर्णायक हुने गरेको छ । सुवास घिसिङ पुत्र मनले नेतृत्व गरेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले विगतदेखि नै राज्यसँग निकट सम्वन्ध राख्दै आएको छ । उसले ममता वेनर्जीको दल तृणमूल कंग्रेसलाई समर्थक गर्ने पक्का छ । मोर्चाले सधैं भाजपाको पक्ष लिँदै आएको छ । गोर्खाल्यान्ड मागप्रति भाजपा सकारात्मक रहेको नेताहरु बताउँछन् । यद्यपि दार्जिलिङबाट जितेर जाने सांसदहरुले अहिलेसम्म गोखाल्यान्डको पक्षमा कुनै ठोस पहलकदमी गरेको देखिन्न ।
यसपटक दार्जिलिङको राजनीतिक माहोल अलि जटिल छ, विगतजस्तो सहज छैन विगतमा गोजमुमो एक ढिक्का थियो । अलि टुक्रिएको छ । विनय तामाङ, अनित थापालगायतले एउटा गुट नेतृत्व गरेका छन् ।
यही गुटले गोर्खाल्यान्ड टेरेटोरियल एडमनिस्ट्रेसनको समेत कुर्सी सम्हालिरहेको छ । संस्थापन गुटमा विमल, रोशन गिरी, रमेश आले, लोपसाङ लामा आदि नेता छन् । राज्य सरकारले विनयकै गुटलाई मोर्चाको आधिकारिक दल ठानेको छ । राज्य सरकारको प्रहरी सूचीमा विमलसहितका यी नेता फरार सूचीमा छन् ।
सिलगढीवाट प्रकाशित हुने विभिन्न नेपाली अखबारहरुका अनुसार भाजपाले चुनावअघि नै विमललाई दार्जिलिङ चढाउने योजना बुनेको छ । भाजपाका दार्जिलिङ अध्यक्ष मनोज देवानका अनुसार भाजपाले विमल गुटको मोर्चासँग मिलेर चुनाव लड्ने निश्चित छ । ‘विमल गुटसँग अर्को गुटको भन्दा समर्थक बढी छन्,’ देवानले भने, ‘त्यही भएर उनीहरुकै समर्थनमा भाजपाले चुनाव लड्छ ।’
प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ २१:१५
घाम ताप्दै, सडकमा पढ्दै
तस्बिरमा हेर्नुहोस् माल्दिभ्सविरुद्ध नेपालको जित
साइकल दौडिरह्यो, सर्वसाधारणले सडक वारपार गरिरहे